Salaamanews » Sharci cusub oo albaabada u furaya bankiyo rasmi ah oo Somaliland laga furo
May 22, 2013 - Somalia: Somaliland Leader Hosts EU Special Envoy to Somalia in Hargeisa ... - May 22, 2013 - Ra’isal wasaare Shirdoon oo Muqdisho kula kulmay wakiilka midowga Africa ee Soomaaliya ... - May 22, 2013 - Xukuumadda Soomaaliya oo bilawday qaadista isbaarooyinka sharci darada ah ee duleedka Muqdisho ... - May 22, 2013 - Safaricom oo raadinaysa fikrado wax ku ool ah oo la xidhiidha barnaamijyada moobiilllada ... - May 22, 2013 - Guddoomiyaha Gobolka Mandheera oo codsaday kulan lagu xaliyo shaqaaqooyinka qabiilada xuduudka isaga gudba ... - May 22, 2013 - Edward Hoseah: Musuq-maasuqa waan ka tirtiri karnaa Tansaaniya ... - May 21, 2013 - Dibad bax ka dhacay Muqdisho oo lagu diiday mooshinka laga keenay xukuumadda RW Saacid ... - May 21, 2013 - Wafdi caalami ah oo tagay Kismaayo ayaa xal u raadinaya hogaanka fashilka u dhaw ee Jubba-land ... - May 21, 2013 - Xildhibaannada ka maqan fadhiyada baarlamaanka oo loogu goodiyey inay xilka weyn doonaan ... - May 21, 2013 - Dowladda Australia oo isku dayeysa inay xiriirka u wanaajiso Soomaaliya ... - May 21, 2013 - AMISOM oo ku dhawaaqday howl gallo saf ballaaran ah oo joogta ka noqon doona Muqdisho ... - May 21, 2013 - Madaxweynaha Puntland oo dowladda ku adkeeyey inay aqoonsato maamulka Jubba-land ... - May 20, 2013 - What happened to Somalia’s pirates? ... - May 20, 2013 - Soomaaliya oo soo celineysa xiriirkeedii Sudan ayaa horumar la rabta ciidankeeda xoogga ... - May 20, 2013 - Dowladda Ghana oo ku biirtay dowladaha taageersan Soomaaliya ... - May 20, 2013 - Muqdisho: Ammaanka iyo isdhex-galka bulshada oo laga dooday ... - May 20, 2013 - Madaxtooyada Muqdisho oo madaafiic lagu weeraray iyadoo al-Shabaab laga adkaaday ... - May 20, 2013 - Madaxweyne Maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka carabta oo kulmay ... - May 20, 2013 - Baarlamaanka Soomaaliya iyo hey’adda nabad sugidda qaranka oo muransan ... - May 19, 2013 - Bayaan: Kooxda al-Shabaab oo qirtay in khilaafka u dhexeeya uu keeni karo in labo garab ay u kala jabto ... - May 19, 2013 - Documents: Dowladda Soomaaliya oo baaq kulul u dirtay Somaliland ... - May 19, 2013 - Urur goboleedka IGAD oo saameyn muuqata ku leh arrimaha Jubbooyinka ayaa la kulmaya caqabo hor-leh ... - May 19, 2013 - Sharci-dajiyayaal Kenya oo halis ugu jira in ay xilka loogala noqdo dalbkooda mushaar kordhinta ... - May 19, 2013 - Sababaha ka danbeeya weerarada galbeedka Kenya oo aan wali caddayn ... - May 19, 2013 - Kenya: Nin lagu tuhmay argagaxisonimo iyo xaaskiisa oo la toogtay ... - May 18, 2013 - Kenya wants the Amisom troops in Somalia expanded ... - May 18, 2013 - Madaxweyne Maxamuud oo shirarka Kismaayo qaadacay ayaa baaq kama dambeys ah u direy Somaliland ... - May 18, 2013 - Kismaayo: Iyadoo ammaanka laga deyriyey ayaa waxaa magaalada yimid wafdi ka socday IGAD ... - May 18, 2013 - Somalialnd: Shacabka iyo madaxda oo xusay 18-ka bishan May ... - May 18, 2013 - AMISOM oo go’aan cad ka qaadatay muranka Jubbooyinka iyadoo Kenya ay ciidamo dheeraad ah rabto ... - webdesign
Home » Dhaqaalaha Sharci cusub oo albaabada u furaya bankiyo rasmi ah oo Somaliland laga furo Print - Daabace: SalaamaNews - Oct 29th, 2012 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Maamulka Somaliland oo fududaynaya sharciyada ganacsigaDhoofinta xoolaha Soomaaliya oo waafaqaya heerka amniga ee caalamkaBangiga adduunka oo lacag ku bixinaya sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha MasarGaadiid badan oo ku xayiran gobolka Gedo oo roob xaagani uu ka da’ay (Sawirro)Dab xoogan oo baabi’iyay suuqii magaalada Gaarisa
(Salaamanews)-Hay’ad dhaqaale si toos ah ugama howlgaleynin Soomaaliya tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1991-kii, balse sharci cusub oo Somaliland lagu meel-mariyay horraantii bishan ayaa abuuray qaabdhismeed hay’adaha gaarka loo leeyahay u oggolaanaya inay bankiyo ka furan karaan oo ay ka howlgali karaan gobolka.
Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa saxiixay Sharciga Bankiya Islaamiga ah October 4-teedi kaddib markii ay oggolaadeen baarlamaan goboleedka bishii September. Sharciga waa laga shaqaynayay illaa iyo 2007-dii.
Bankiyada gaarka loo leeyahay ayaa si xaddidan uga howlgalayay Somaliland gudaheeda dhowrkii sano ee la soo dhaafay, kuwaas oo ay ku jiraan bankiga Djibouti saldhiggiisa yahay ee Salaam African Bank, Dahabshil Bank iyo bankiga Yemen saldhiggiisu yahay ee Co-operative and Agriculture Credit Bank.
Sarrifle taleefoon ku hadlaya iyadoo dhinaciisana ay taallo raso lacag ah magaalada Hargaysa. Sharciyo bank oo cusub ayaa muwaadiniinta u oggolaanaya inay lacagahooda ku haystaan qasnado [akoonno] shaqsiyeed, intii ay guryaha ama meelo aan xafidnayn ay u oolli lahayd. [Simon Maina/AFP]Cabdiqani Harir, oo ku-xigeenka maamulaha howlaha ka ah laanta Hargaysa ee SalaamAfrican Bank, ayaa sheegay in sharciga cusub uu fududeeynayo furista bangiyo ganacsi oo ku shaqeeya nidaamka islaamiga ah oo uu shatiyo siiyo Bankiga Somaliland, bangiga dhexe ee maamul-goboleedka.
Tan iyo 2010-kii, Salaam African Bank wuxuu laamo ku lahaa magaalooyin dhowr ah oo Soomaaliya ku yaalla laakin dhammaan adeegga ganacsi waxaa la sii marinayay Djibouti, ayuu Sabahi u sheegay Harir.
“Waxaa na daahiyay meel-marinta sharcigan waanan soo dhowaynaynaa hirgalintiisa,” ayuu yiri.
Fududeynta howlaha ganacsi
Tan iyo markii la meel-mariyay sharcigan cusub, Harir wuxuu sheegay in bankigiisa uu ka shaqaynayay furista akoonno wax lagu shubto iyo adeegga xawilaadda lacagta iyadoo la isticmaalayo wax isugu xawilka telekiska [ Telex Transfers].
Bankiga wuxuu xiriir wada-shaqayn la lahaa tiro bankiyo caalami ah sida Commerzbank-ga Germany, Barclays-ka London, Bank Asya-ha Turkiga iyo Bankiga Islaamiga ah ee Noor oo saldhiggiisu yahay Dubai, ayuu Hirir yiri.
Macaamiisha lacagaha marsata bankiga waxay si fudud lacatooda ugala socon karaan taleefoonnadooda gacanta iyagoo isticmaalaya adeegga Zaad ee Telesom, ayuu yiri. “Waxaa intaa sii dheer, macmiil kasta wuxuu dhaq-dhaqaaqa akoonkiisa ka eegi karaa Internetka isagoo jooga gurigiisa, shaqadiisa ama xafiiskiisa..”
Bankiga wuxuu sidoo kale dhowaan soo bandhigay kaarka lacagaha kaas oo macaamiisha u oggolaanaya inay wax kaga iibsadaan Internetka, ayuu yiri.
Harir wuxuu sheegay inta badan muwaadiniinta waxay lacagaha ku haystaa guryahooda iyo meelo kale oo aan xafidnayn ama aan ku habboonayn, laakin ay dadka barayaan sida ammaanka ah ee loo maareeyo lacagta.
Furista bankiyo ganacsi oo gaar loo leeyahay wuxuu kaloo oggolaanayaa shirkadaha ganacsi inay si fudud alaabta uga soo iibsadaan dibadda.
“Horay, waxaa la igu qasbay inaan si muuqata u qaato lacagtayda oo aan u diro [loo diro gadayaasha laga qaado bankiyada] Djibouti ama Dubai, taas oo aan ammaan ahayn,” Faysal Ismaaciil, oo dharka geeya Hargaysa, ayaa Sabahi u sheegay.
Soo jiidashada maal-gashadeyaasha shisheeye iyo kobcinta dhaqaalaha
Furista bankiyo ku shaqeeya nidaamyada Islaamiga ah waxay gobolka ka caawinayaan kobaca dhaqaalaha iyo inuu gaaro deggenaansho iyadoo la mamnuucayo wax kasta oo sharcidarro ku ah diinta, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cusmaan Aadan oo ka tirsan Xarunta saldhiggeedu yahay Hargaysa ee Waxbarashada Mustaqbalka iyo La-talinta ee Beder.
Hadda oo sharciga la unkay, Aadan wuxuu sheegay in xaruntiisa ay diyaarinayso hab-raacyo banki oo lagu saleeyay nidaamyada Islaamiga ah.
“Waxaan kaloo rabnaa inaan dhallinyarada barno bankiyada Islaamiga ah si ugu shaqaystaan,” ayuu Sabahi u sheegay, isagoo intaa ku daray in xarunta ay ka qalin-jabiyeen 250 arday labadii sano ee la soo dhaafay kuwaas oo qaatay tababarro ganacsi oo ku salaysan dhaqaalaha Islaamka.
Maadaama shilinka Somaliland ay tahay lacag aan laga aqoonsanayn suuqa caalamiga ah, bankiyada waa inay isticmaalaan lacagaha caalamiga ah ee jira, ayuu Aadan yiri. “Xitaa shilinka Soomaaliga ah, oo mar-marka qaar si sharcidarro ah loo daabaco, lama aqoonsana, sidaa darteed bankiyada waa inay dhaq-dhaqaaqooda ganacsi ku saleeyaan doollarka Maraykanka,” ayuu yiri.
Sharciga wuxuu shirkadaha caalamiga ah ee maalgashiga ku dhiirragelinayaa inay isku biimeeyaan gudaha Somaliland, ayuu Aadan yiri, muwaadiniintana ay u oggolaato inay ammaahdaan lacago shareecada waafaqsan oo ay maal-gashi u isticmaalaan. “Taas waxay horseedi doontaa inuu horumaro habka dhaqaalaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliya,” ayuu yiri.
Xigasho: Sabahi Online
Tags: ganacsiga « Qoraalkii HoreCiidamo ka tirsan kuwa qalabka sida’ ee Soomaaliya oo tababar uga furmay Jabuuti	Qoraalka Xiga »Saamaynta xun ee qaadka oo khatar galinaya jiilka xiga ee Soomaalida	Halkan Hoose ku Jawaab
Xukuumadda Soomaaliya oo bilawday qaadista isbaarooyinka sharci darada ah ee duleedka Muqdisho
- May 22, 2013	Safaricom oo raadinaysa fikrado wax ku ool ah oo la xidhiidha barnaamijyada moobiilllada
- May 22, 2013	Guddoomiyaha Gobolka Mandheera oo codsaday kulan lagu xaliyo shaqaaqooyinka qabiilada xuduudka isaga gudba
- May 22, 2013	Edward Hoseah: Musuq-maasuqa waan ka tirtiri karnaa Tansaaniya
- May 22, 2013	Sharci-dajiyayaal Kenya oo halis ugu jira in ay xilka loogala noqdo dalbkooda mushaar kordhinta
- May 19, 2013	Maqaallo | Qoraalladii hore »